“RW Cabdiweli waa inuu xilka ka dego ka hor 30ka bisha” Xildhibaanadii mooshin ka keenay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
“RW Cabdiweli waa inuu xilka ka dego ka hor 30ka bisha” Xildhibaanadii mooshin ka keenay
Mareeg.com: Xildhibaanada doonaya in la rido R/wasaare C/weli Sheekh Axmed ayaa maanta kulan ku yeeshay Muqdisho, waxeyna kulankaas kasoo saareen War-murtiyeed.
Qoraalka ay soo saareen xildhibaanada mooshinka ka keenay RW Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey Xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali, wuxuuna u qornaa sidan:-
WAR MURTIYEED AQLABIYADDA XILDHIBAANADA GOLAHA SHACABKA
Muqdisho, 26 November 2014
Annagoo ku hadlayna magaca aqlabiyadda xildhibaannada Golaha Shacabka gudaneynana waajibaadkeena dastuuriga ah ee aan ku dhaaranay ilaalinaynana danta qaranka, dhowraynana Dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala, waxaan halkaan idinkugu soo gudbineynaa aragtideena ku aaddan qodobada soo socda:
1. War murtiyeedkii Guddoonka Baarlamaanka kasoo baxay 24/11/2014 ee looga hadlayay mooshinka kalsooni kala noqoshada Raisul Wasaaraha iyo xukuumadiisa iyo arrimaha la xiriira.
2. Hab-dhaqankii Xildhibaanada saaxibadeen ah ee kasoo horjeeday mooshin kii Guddoonka barlamaanku qabtay 6/11/2014, loona qaybiyay golaha shacabka 24/11/2014, loona balansanyahay in laga doodo maalinta Axada ah ee taariikhdu tahay 30/11/2014.
3. Shirkii Jaraa’id ee Raisul Wasaare Cabdiwali Shiikh Axmed uu qabtay 24/11/2014.
A. Guddoonka Golaha Shacabka
1. Guddoonka Golaha Shacabka waxaan ku bogaadineynaa inuu si sharci ah u aqbalay mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda, isla markaasna u qaybiyay xubnaha Golaha shacabka, lagana doodi doono maalinta Axadda ah ee taariikhdu tahay 30/11/2014 sida ku xusan warmurtiyeedkii kasoo baxay xaafiiska Gudoonka 24/11/2014 iyo warqadda sumadeedu tahay 540/251/914, ee kasoo baxday xaafiiska gudoomiyaha 24/11/2014 ee ku lifaaqan mooshinka la qeybiyay.
2. Waxaan soo dhaweyneynaa soo jeedintii Guddoomiyaha Baarlamaanka ee ku aaddanayd in xal loo helo nidaamdarrada iyo buuqa abaabulan ee lagu hor istaagyo howlihii golaha shacabka iyo shaqadii Gudoonka. Waxaanan diyaar u nahay inaan gacan ka siinno Gudoonka xal u helidda arrintaas iyada oo loo marayo dastuurka iyo xeerhoosaadka Golaha shacabka.
3. Waxaan walaac weyn ka qabnaa erayada siyaasadeysan ee uu Guddoonku ku soo celceliyey sida “kala qaybsanaan” oo u muuqda inuu ku shaabadaynayo Baarlamaanka halkii uu ku micneyn lahaa kala duwaansho ra’yi oo ku dhisan go’aan qaadasho baarlamaan oo waafaqsan dastuurka iyo xeerhoosaadka golaha shacabka, iyadoo aqlabiyadda golaha ay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan dastuurka iyo xeerhoosadka golaha shacabka.
4. Waxaa soo dhaweyn iyo qaddarin mudan xilkasnimada iyo qunyar socodnimada uu muujinayo guddoonku, hase ahaatee loo baahanyahay inuu ku baraarugsanaado in taasi aysan dhaawicin nidaamka iyo hanaanka shaqo ee golaha shacabka.
5. Annagoo ah aqlabiyadda xubnaha golaha shacabka waxaan marlabaad adkeynaynaa in Guddoonka Barlamaanku furo doodda mooshinka kalsooni kala moqoshada Raisul Wasaare Cabdiwali iyo Xukuumadiisa ee loo xadiday maalinta Axada ah ee taariikhdu ku beegantahay 30 November 2014.
6. Waxaan ka digeynaa in buuqa iyo dhaqanka gurracan ee ay jideeyeen xildhibaannada tirada yar ee lagu hor-istaagayo habsami u socodkii howlaha golaha shacabka ay keeni karto caado xun oo joogta noqoto, dhici kartana in ay carqalad ku noqoto Hiigsiga cusub ee 2016 iyo howlaha kale ee Golaha u yaalla.
7. Waxaan xasuusineynaa Guddoonka sharafta leh in dulqaadka aqlabiyadda golaha shacabka uu sii yaraanayo, marka laga eego qaabka gudoonku u maareeynayo habsami u socodka hawlaha golaha iyo sida uu uga gaabiyey adeegsiga awoodaha sharcigu siiyey ee ku aaddan ilaalinta nidaamka Golaha Shacabka.
B. Xildhibaanada ka dhex wada fowdada Golaha Shacabka.
1. Waxaa nasiib darro ah in Xildhibaankii loo igmaday ka tarjumidda danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed, iyo ilaalinta dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala in uu ku kaco ficilo qas iyo fowda ah oo wax u dhimaya habsami u socodka hawlaha Golaha shacabka, xasiloonida dalka iyo dawladnimada Soomaaliya.
2. Xildhibaanadda tirada yar ee buuqa iyo fowdada wada waxay meel uga dhaceen sharafka iyo karaamada Baarlamaanka, waxay ku xadgudbeen dhamaan xeerarkii golaha shacabka ee ilaalinayey habsami u socodka hawlaha golaha iyo hantida qaranka ee goluhu adeegsado, Tusaale ahaan waxay golaha la soo galeen isloogano iyo hadalo kicin kara xasilooni daro, abuurayana khalkhal siyaasadeed iyo mid amni, waxay xoog u adeegsadeen shaqaalihii Golaha Shacabka iyo ciidankii amniga ee xarunta Barlamaanka, waxayna in ka badan toban jeer jeexjeexeen Ajandihii iyo magacyadii xaadirinta Xildhibaandda, waxay burburiyeen cod-baahiyayaal, qalabkii isgaarsiinta iyo koronta ee Golaha Shacabka, waxayna hor-istaageen amaraddii iyo talooyinka Gudoonka Golaha shacabku u soo jeediyey.
3. Hadaba si looga hortago in la caadeysto fowdada iyo u hugaansamin la’aanta amarada Guddoonka Golaha Shacabka waxaan codsanaynaa in Xildhibaanadii ku kacay ficiladaas laga qaado talaabo anshax marin ah oo ku haboon.
C. Raisul Wasaaraha Xukuumada
1. Waxaan ka anfariirney erayadii ka soo yeeray Ra’isul Wasaare Cabdiwali Shiikh Axmed shirkiisii jaraa’id ee uu qabtay 24 November 2014. Erayadaas oo ay ka muuqatey masuuliyad xumo iyo kalsooni darro ad u baaxad weyn, isagoo u gafay mudnaanta iyo kala madax-banaanshaha hay’adaha dowladda iyo mas’uuliyadooda shaqo intaba.
2. Ra’isul Wasaaruhu wuxuu ku andacooday in mooshinka ay saxiixeen 138 Xildhibaan ee guddoonka golaha shacabkuna xaqiijiyay in uu waafaqsan yahay dastuurka iyo xeerhoosaadka golaha shacabka uu ku tilmaamo in uu “xaaraan yahay” isagoo si cad ugu xadgudbay Dastuurka iyo xeerhoosaadka golaha shacabka ee qeexaya in uu leeyahay Golaha shacabka awoodda kalsooni kala noqoshada Raisul Wasaaraha iyo Xukuumadiisa.
3. Waxaa nasiib darro ah in Ra’iisal Wasaaruhu soo abaabulo tiro yar oo Xildhibaano ah si ay qas iyo buuq uga dhex abuuraan golaha dhexdiisa, isagoo si bareer ah u qirtay in uu ka danbeeyo isla markaasna kusii dhiiri-geliyay, kuna abaalmariyay joogteynta falalkaan gurracan ee lagu naafeynayo howlihii dastuuriga ahaa ee Golaha shacabka, taasoo dhaawacaysa kala madax
banaanshaha iyo isla xisaabtanka ka dhaxeeya Golaha shacabka iyo xukuumada
4. Waxaa kale oo la yaab leh in Ra’isul Wasaaruhu si bareer ah u been turjumey war murtiyeedkii Guddoonka Baarlamaanka isagoo uga dan leh inuu sii jiido wakhtiga si uu u helo cimri dheeri siyaasadeed.
5. Waxaa ayaan darro ah, in Ra’isul Wasaaruhu si qayaxan oo xadgudub iyo ixtiraam darro ah warbaahinta uga dhaleeceeyo Xildhibaannadii siiyey sharciyadda uu ku joogo.
6. Waxaa xusid mudan in Ra’iisal Wasaaruhu iska indho tirayo inuu lumiyey kalsoonidii iyo wada shaqeyntii aqlabiyadda Golaha Shacabka, tii Madaxweynaha iyo inta badan ee golihiisa wasiirada. Sidaa darteed, waxaan usoo jeedinaynaa in uu xilka iskaga dego inta aan loo qaadin codka kalsooni kala noqoshada Golaha Shacabka maalinta Axada ah ee taariikhdu tahay 30 November 2014, si fursad loo siiyo Ra’isul Wasaare samata bixin kara dalka iyo dadka Soomaaliyeed lana shaqeyn kara hay’adaha dastuuriga ah ee dalka.
Akhri: Magacyada xildhibaanada diidan mooshinka ka dhanka ah RW iyo qoraal ay u direen beesha caalamka